किसान Archives - Page4of 42 - कृषि पत्रिका
बुधबार १६ पुष, २०७६
बनेपा। काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका र वडा नं ९ को संयुक्त आयोजनामा पलाञ्चोकका किसानलाई २५ वटा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ । पाँचखाल नगरपालिका–९ को कार्यालयमा मङ्गलबार कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरप्रमुख महेश खरेलले स्थानीय कृषकलाई ट्र्याक्टर वितरण गर्नुभएको हो । ट्र्याक्टर हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख खरेलले कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीमा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्र्याक्टर वितरण गरेको […]
पसिनाको मूल्य खोज्दै किसान
रमेश लम्साल /अशोक घिमिरे मङ्गलबार १५ पुष, २०७६
ती दारी जुँगा फुलेका छन्, ती दाँत सबै फुक्लेका छन्, तर पनि ‘को खेतमा छ बूढो किसान । बर्खा झरी, हिउँद भरि, काम ग¥यो मरी मरी, तर पनि चैन छैन, बस्ने खाने ठेगान छैन, बराजुको ऋणमा छ बूढो किसान । जनगायक जीवन शर्माको ‘बूढो किसान’ गीतमा भनिए जस्तै सर्लाही धनकौलका ६० वर्षीय सीताराम महतो १२ […]
अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक केराखेतीतर्फ पाल्पाका कृषक
आइतबार १३ पुष, २०७६
बेझाङ। केराखेतीबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि पाल्पाका कृषक व्यावसायिकरूपमा केराखेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । बजारमा केराको माग बढ्न थालेपछि बाँझो रहेका जग्गा सदुपयोग हुने भन्दै यहाँका कृषकले व्यावसायिक तवरबाट केराखेती शुरु गरेका हुन् । रामपुर नगरपालिका–६ मैदानबारी बस्ने लोकनाथ ढकालले राम्रै अन्नबाली उत्पादन हुने जग्गामा केरा लगाएका छन् । उनले डेढ वर्षअघिदेखि व्यावसायिक तरिकाले […]
व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै बर्दियाका थारु महिला
शुक्रबार ११ पुष, २०७६
बाँके। रोजगारी नभएको भन्दै पछिल्लो समय थुप्रै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् तर बर्दियाका थारु समुदायका महिलाले घरमै रोजगारीको सिर्जना गरेका छन् । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–६ भदैयाका थारु महिला घरमै व्यावसायिकरूपमा तरकारी उत्पादन गरी आत्मनिर्भरको बाटोमा छन् । तरकारी बेचेरै परिवारको खर्च धान्ने थारु महिलाले मासिक रू. ३५ हजारसम्म कमाउने गरेका छन् । उनीहरू नेपालगञ्जको […]
भारतले गण्डक नहरमा पानी नछाड्दा ४० हजार हेक्टरको गहुँ खेती प्रभावित
सोमबार २३ मङि्सर, २०७६
पर्सा। भारतीय पक्षले यसपालि गण्डक नहरमा पानी नछाड्ने भएपछि पर्सा, बारा तथा रौतहट जिल्लामा यस वर्ष गहुँ खेती प्रभावित हुने भएको छ । भारतीय पक्षले गण्डक नहरमा गहुँ खेतीका लागि डिसेम्बर तेस्रो साता (पुस १५) भित्र पानी छोडी सक्नुपर्नेमा भारत पश्चिम चम्पारणस्थित १०६ दशमलव ४५ आरडीमा लोकल ड्रेन साइफनको मर्मतसम्भार गर्ने गरेकाले यस वर्ष गहुँ […]
शिक्षण पेशा छाडेर कृषि कर्ममा
बुधबार ०४ मङि्सर, २०७६
खोटाङ। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ का सुवाश जोशीको कृषि फार्ममा सात जना स्थानीय युवा कार्यरत छन् । दिक्तेलस्थित अल्छेढुङ्गामा सञ्चालन गरिएको कृषि फार्ममा काम गर्ने स्थानीय युवाको मासिक तलब रु दश हजारदेखि रु १५ हजारसम्म छ । कृषि फार्ममा काम गर्ने युवालाई खान, बस्न र लगाउन निःशुल्क छ । जोशीको फार्ममा ब्रोइलर कुखुरा, लेयर्स कुखुरा, […]
उत्पादन बढाउन सामूहिक आलु लगाउँदै रामपुरका कृषक
सोमबार ०२ मङि्सर, २०७६
पाल्पा। आलु खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि पाल्पा रामपुरका कृषक सामूहिक आलु खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र आलु लगाउँदै आएका यहाँका कृषक समूहमा मिलेर आलु लगाउन शुरु गरेका हुन् । रामपुर नगरपालिका–६ मा रहेका कृषि समूहका सदस्यहरु यतिबेला आलु लगाउने कार्यमा व्यस्त छन् । तालपोखरा कृषक समूहले यस वर्ष १० […]
शुक्रबार २९ कार्तिक, २०७६
ललितपुर। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्डले कफीको नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । बैठककले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कफीको न्यूनतम उत्पादन मूल्य निर्धारण गरेको सूचना अधिकारी गौरव लुईटेलले बताए । नयाँ निर्धारित मूल्यसूची अनुसार फ्रेस चेरी कफी ग्रेड ‘ए’ को प्रति केजी ८५ रुपैयाँ र ग्रेड ‘बी’ को ७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ […]
कृषि उद्यम गर्ने हो ? सरकारले दिन्छ आधा खर्च , यसरी दिनुहोस आवेदन
बुधबार २७ कार्तिक, २०७६
ललितपुर। सरकारले चालू आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि लागू हुने गरी २८ जिल्लामा ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै स्वरोजगार बनाउन सरकारले ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम प्रक्रिया २०७६’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । कार्यक्रम अन्र्तगत कृषि उद्यम तथा कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरुले कुल लागतको ५० प्रतिशत […]
८० किलोको एउटै बोकाको मूल्य ३ लाख
बेनी। एउटै बोकाको मूल्य करीब रु तीन लाख परेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यहाँका एक किसानले एउटै बोकालाई रु दुई लाख ९० हजारमा बिक्री गरेका छन् । बेनी नगरपालिका–९स्थित तोरीपानीमा विगत छ वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा उन्नत जातको बाख्रापालन गर्दै आउनुभएका किसान आनन्द रिजालले बोयर जातको एउटै बोकालाई उक्त मूल्यमा बिक्री गरेको बताउनुभयो । उहाँले […]